Ity ny fampitahana eo amin'ny batterie an'ny laharana iPhone 13 | Vaovao IPhone
Ny iPhone 13 vaovao dia nampiditra zava-baovao manan-danja eo amin'ny haavon'ny Hardware. Anisan'ireo zava-baovao ireo ny chip A15 Bionic vaovao izay mametraka CPU vaovao misy 6-core, GPU vaovao 4 na 5-core vaovao miankina amin'ny maodely sy ny Neural Engine 16-core. Ho fanampin'izany, ny fampisehoana Super Retina XDR vaovao dia mahomby kokoa ary mamela ny fanjifana angovo kely kokoa. Ity combo an'ny fitaovana voalohany ity Izy io dia namela ny batterie an'ny iPhone 13 hahomby kokoa ary hampitombo ny fizakantena momba ny iPhone 12. Manaraka izany dia mamakafaka ny androm-piainan'ny seha-iPhone vaovao.
Ny batterie an'ny iPhone 13 vaovao hianarana
Ny maha-zava-dehibe ny fizakan-tena amin'ny fitaovana iray dia fanalahidy amin'ny fanapahana hevitra raha hividy azy na tsia. Amin'ny tranga iPhones, Apple dia manome lanja betsaka amin'ny famelabelarany momba ny fanatsarana ny bateria raha oharina amin'ny taranaka teo aloha. Ny fampitomboana ny fiainana bateria dia mety ho tonga amin'ny fomba roa. Voalohany, fitomboan'ny haben'ny bateria manome fahaiza-manao bebe kokoa ary noho izany mampiasa fotoana lava kokoa. Na faharoa, mampihena ny fanjifana ny fitaovana hahatonga azy io hahomby kokoa mamokatra fihenan'ny fihinanana.
Ho an'i Apple, ny fahaleovantenan'ireo fitaovany dia refesina amin'ny fotoanan'ny playback video, streaming video ary ny playback audio. Raha ny marina, raha ny angom-baovao ofisialy dia manana ny iPhone 13 sy 13 Pro Max Fahaleovan-tena ora 2,5 fanampiny ary iPhone 13 mini ary iPhone 13 Pro 1,5 ora fanampiny noho ny mitovy aminy ao amin'ny laharana iPhone 12.
Ity ny latabatra izay ampitahain'ny batterie an'ny iPhone 13 amin'ny angona ofisialy avy amin'ny Apple. Mazava ho azy fa ny fanombanana farany dia hataon'ireo mpampiasa rehefa manomboka mampiasa ireo fitaovana isan'andro izy ireo. KOA Ny sisa tazana ho hita bateria fahaiza mampitaha raha nitombo izy ireo na tsia momba ny iPhone 12.
Famerenana video Hatramin'ny 17 ora Hatramin'ny 19 ora Hatramin'ny 22 ora Hatramin'ny 28 ora
Fandefasana horonantsary Hatramin'ny 13 ora Hatramin'ny 15 ora Hatramin'ny 20 ora Hatramin'ny 25 ora
Play audio Hatramin'ny 55 ora Hatramin'ny 75 ora Hatramin'ny 75 ora Hatramin'ny 95 ora
Fiampangana haingana Hatramin'ny 50% dia averina ao anatin'ny 30 minitra miaraka amin'ny adaptatera 20W na avo kokoa Hatramin'ny 50% dia averina ao anatin'ny 30 minitra miaraka amin'ny adaptatera 20W na avo kokoa Hatramin'ny 50% dia averina ao anatin'ny 30 minitra miaraka amin'ny adaptatera 20W na avo kokoa Hatramin'ny 50% dia averina ao anatin'ny 35 minitra miaraka amin'ny adaptatera 20W na avo kokoa
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fantson'ny IPhone » iPhone 13 » Ity ny fampitahana eo amin'ny batterie an'ny laharana manontolo an'ny iPhone 13
Podcast 13x04: Apple Keynote, be resaka momba ny tsy misy.
Ny iPhone 13 vaovao dia misy fanohanana roa eSIM